Paita Zverudo Here Apa?—Chikamu 2 | Vechiduku Vanobvunza Kuti
Unoda kuti shamwari yako ione kuti wakagadzirira kutaura nayo painenge ichida kutaura newe. Uye munguva yadarika manga muchingotaura kasingaperi neimwe shamwari yako. Asi kana uri mukomana, shamwari yacho ndeyechisikana, uye kana uri musikana, ndeyechikomana. Nechemumwoyo unoti, ‘Tingori shamwari chete,’ uchifunga kuti ndomaonero ari kuitawo shamwari yako iyoyo. Pane chakaipa here?
Nei zviine basa?
Kana uri mukomana, hapana chakaipa nekuva neshamwari dzechisikana, uyewo kana uri musikana, hapana chakaipa nekuva neshamwari dzechikomana. Asi ko kana ukabva watanga kumuitira zvimwe zvinhu zvakanaka zvausingaitiri vamwe vese? Pakadaro iye wacho angatofunga kuti une zvimwe zvauri kuda zvinopfuura kungovawo shamwari chete.
Zvibvunze kuti, ndizvo here zvandiri kunyatsoda kuti afunge? Ona kuti izvi zvingaitika sei, dzimwe nguva usina kuzvironga.
Unoratidza kuti unofarira mumwe munhu zvakanyanya.
“Kunyange zvazvo usingakwanisi kudzora manzwiro anoita mumwe munhu, haufaniri kubva watowedzera moto nekutaura kuti mungori shamwari chete asi iwe uchigara uchimufonera uye uchitaura naye kakawanda.”​—Sierra.
Unoratidza kuti newe unomufarirawo.
“Pane mumwe musikana wandaigara ndichipindura mameseji akawanda aaindinyorera, kunyange zvazvo ndisiri ini hangu ndaitanga kumunyorera. Asi nekufamba kwenguva zvainge zvava kundiomera kuti ndimutsanangurire kuti ndaingomuona seshamwari yangu chete.”​—Richard.
Unoita kuti mumwe munhu akufarire.
“Vamwe vanhu vanongonakidzwa nekutamba nemwoyo wemumwe munhu. Vanenge vasina kana chinangwa chekudanana nemunhu iyeye. Ndakazviona zvichiitika kakawanda, uye zvaiita kuti mumwe munhu asare achirwadziwa.”​—Tamara.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva ndechekuti: Kugara muchitaura mese, uchiratidza kuti unomufarira zvinoita kuti mumwe afunge kuti patoita zverudo.
Nei zviine basa
Zvinoita kuti mumwe arwadziwe.
Bhaibheri rinoti: “Kana chinhu chinotarisirwa chikanonoka, chinoita kuti mwoyo urware.” (Zvirevo 13:12) Kana mumwe munhu akaramba achiita seari kukuda, zvii zvaunozopedzisira wava kutarisira?
“Zvinomboitika pakati pemukomana nemusikana zvakafanana nemunhu anobata hove oirega iri pachirauro, asingaibvisi pachirauro chacho kana kuti kuidzorera hake mumvura. Saka kana usati wava kuda zvekudanana nemumwe munhu asi woramba wakaita sewakamubata ‘pachirauro,’ zvinorwadza chaizvo.”​—Jessica.
Zvinokanganisa maonerwo aunoitwa.
Bhaibheri rinoti: ‘Musaramba muchiva nehanya nezvinhu zvamunoda imi pachenyu, asi ivai nehanya nezvinhu zvinodiwawo nevamwe.’ (VaFiripi 2:4) Munhu ane hanya nezvakangomunakira iye chete ungati munhu ane unhu hwakaita sei? Unhu ihwohwo hungakanganisa sei maonerwo aanoitwa?
“Handifariri mukomana anotamba nemwoyo yevasikana. Uyezve, munhu anoita zvakadaro anoratidza kuti ndizvo zvaanogona kuzoita kana aroora. Kunenge kuri kushandisa mumwe munhu kuti uone kuti unodiwawo here, uye zvinoratidza kuti unongofunga zvakakunakira chete.”​—Julia.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva ndechekuti: Vanhu vanotamba nemwoyo wemumwe munhu asi vasina chinangwa chekudanana nemunhu iyeye vanorwadzisa vamwe uye zvinoita kuti vasaonekwa zvakanaka.
Bhaibheri rinotikurudzira kuti tibate “varume vaduku sevanun’una” uye “vakadzi vaduku sehanzvadzi nokuchena kwose.” (1 Timoti 5:​1, 2) Kana ukashandisa zano iroro, zvichaita kuti ushamwaridzane zvakanaka nevasikana kana uri mukomana, uye nevakomana kana uri musikana.
“Kudai ndakaroorwa, ndaisazombotamba nemurume wemunhu ndichiita sendinomuda. Saka zvinotobatsira kuti iye zvino ndizive pekugumira pakushamwaridzana nevakomana, kuitira pandinenge ndazoroorwa.”​—Leah.
Bhaibheri rinoti: “Pamashoko mazhinji hapashayikwi kudarika.” (Zvirevo 10:19) Pfungwa iyoyo haingorevi mashoko atinotaura nemuromo asiwo atinoita zvekutumira mumameseji​—uye kuti tinozviita kakawanda sei uye kuti tinenge tichitaura nezvei.
“Kutaura chokwadi, hapana chikonzero chekuti utumirane mameseji nemusikana zuva nezuva kunze kwekunge uchimuda.”​—Brian.
Bhaibheri rinoti: “Asi uchenjeri hunobva kumusoro, kutanga, hwakachena.” (Jakobho 3:17) Hazvina hazvo kuipa kumbundira munhu​—asi dzimwe nguva zvinogona kutorwa sekuti paita zverudo.
“Ndinoedza kuratidza ushamwari pandinenge ndichitaura nemukomana asi ndisingazosviki pakuita kuti afunge kuti ndiri kumuda, kana kubva ndati kwati kwati naye patinenge tichitaura tese.”​—Maria.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva ndechekuti: Unofanira kunyatsoongorora zvaunoita neshamwari dzechisikana kana uri mukomana, uye dzechikomana kana uri musikana. “Zvakati omei kuwana shamwari dzakanaka,” anodaro mumwe musikana achiri kuyaruka anonzi Jennifer, “uyezve haungamboda kukanganisa ushamwari hwenyu nekuita zvinoita kuti dzifunge kuti paita zverudo asi ipo pasina.”
Nyatsoteerera zvinotaurwa nevamwe. Kana munhu akakubvunza kuti, “Ko muri kudanana here nanhingi?” zvinogona kunge zvichiratidza kuti ushamwari hwenyu hwanyanya.
Usachinja mabatiro aunoita shamwari dzako dzechisikana kana uri mukomana, uye dzechikomana kana uri musikana. Usabva waratidza kuti unonyanya kufarira munhu mumwe chete kudarika vamwe vese.
Ngwarira panyaya dzekutumirana mameseji​—kusanganisirawo kuti unotumira mameseji kakawanda sei, zvaunotaura zvacho, uye nguva yaunotumira mameseji acho. “Haufaniri kutumira musikana kana kuti mukomana meseji pakati peusiku,” anodaro mumwe musikana anonzi Alyssa.
Wana mazano anogona kukubatsira kuziva kuti munhu ari kukuda here kana kuti ari kungoda kuvawo hake shamwari.